सास फेर्न गार्हो हुन्छ वा दम छ? यसरी उपचार गर्न सकिन्छ :: a1nepal.com.np
सास फेर्न गार्हो हुन्छ वा दम छ? यसरी उपचार गर्न सकिन्छ
चिसो बढेसँगै धेरैलाई स्वासप्रश्वासमा कठिनाई भइरहेको होला । कतिलाई सामान्य हिँडडुल गर्दा सास बढ्ने समस्या होला । कतिले राती सुत्नै नपाएको पनि हुनसक्छ ।
दमअर्थात दम जटिल समस्या हो । यो पूर्णतया निको हुने समस्या पनि होइन । केहि तरीका छ, जसलाई अपनाएर यो समस्याको नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ ।
किन हुन्छ दम ?
सामान्यत चिसो, फ्लु, ब्रोन्काइटिस, साइनसको संक्रमण जस्ता विषाणु वा ब्याक्टेरियल आक्रमणले अस्थामा हुनसक्छ । खासगरी बच्चालाई यसले दुख दिन्छ । चुरोटको धुँवामा विभिन्न रासायनिक कणहरु हुन्छन, जसले फोक्सोमा समस्या पैदा गर्छ ।
कसलाई हुन्छ ?
-दमका रोगीलाई कफ आउने ।
– सास लिनमा समस्या, छातीमा भारी महशुश हुने ।
-खोकी लाग्ने लगायतका विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने ।
-दमका रोगीको स्वास प्रस्वास नली साँघुरीने तथा फोक्सो सुनिने ।
-दमको रोगमा मह एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ । एउटा जगमा मह हाल्ने र त्यसको नजिक बसेर गहिरो सास लिने गर्नुपर्छ । यसले श्वासप्रश्वासमा सहज हुन्छ ।
-दम रोगीका लागि बेसार पनि राम्रो औषधी मानिन्छ । दम रोगीले दिनमा दुई देखि तीन पटकसम्म एक गिलास दुधमा एक चम्चा बेसार मिसाएर पिउनुपर्छ । यसको प्रयोग खाली पेटमा गर्नुपर्छ ।
-दमको रोगीले हल्का भोजन गर्नुपर्छ । किनभने भारी भोजन सेवनले श्वासमा कमी वा श्वास लिनमा गाह्रो हुन्छ । साथै हप्तामा एक पटक उपवास बस्नु लाभदायक हुन्छ ।
-दमको रोगीले एकै पटकमा धेरै खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन । थोरै खानेकुरा बिस्तारै, बिस्तारै चपाएर खानुपर्छ । दिनमा ८ देखि १० गिलास पानी जरुर पिउनुपर्छ ।
-सुत्दा होचो सिरानी गरेर सुत्ने बानी गर्नुपर्छ । यसले दमको असर क्रमश: कम भएर जान्छ ।
सर्वोच्चको आदेशले मालामाल बन्दै व्यवसायी, टक्टकिंदै राजस्व करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा अस्पताललाई श्रीजंग शाह दम्पतीद्वारा एक अर्ब दान, को हुन् शाह दम्पती ? प्युठान जिल्ला अस्पतालमा डिम्बाशयमा हुने जटिल खाले पानीको फोका(DERMATOID CYST) को अप्रेशन फोनमा खर्च गरेको भन्दै कुलमानलाई टेलिकमको सम्मान राजमार्गलाई सुन्दरता प्रदान गर्न कम्मर कसे वुटवलका महिला (भिडियो सहित) सामाजिक अभियन्ता एस एस डिआरसीकी संचालिका सविता उप्रेती राजधानीका लागि बुटवलमा पनि आन्दोलन चर्कियो आठौं विन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्ड–२०७४ , हुरीमा दियोलाई ह्याट्रिक अवार्ड
← प्युठान जिल्ला अस्पतालमा डिम्बाशयमा हुने जटिल खाले पानीको फोका(DERMATOID CYST) को अप्रेशन	कुन मोडमा पुग्यो एमाले-माओवादी एकता वार्ता ? →